Shukaansi qoraal ah oo soo jiidasho leh: Baro erayo shukaansi jaceyl ah oo aad u macaan
Shukaansi - WAxaan kuu ahaan doonaa ruux naftaada daacad au ah
Waxaa iska caddaan ah marka la soo qaado erayga shukaansi in dad badan ay dhagta u taagayaan oo ay niyadooda ku soo dhacayso gabar iyo wiil hasaawe ama shukaansi dhex marayo taas oo jirta ayaan hadana waxaan jeclahay in aan halkan ku falanqeeyo shukansiga iyo waxa uu yahay.
Haddaan wax yar ku nasano erayga shukaansi waxaa jira erayo kale oo la macne ah kuwaas oo aan isku dayi doono in aan lafo gurno.
Erayadaasna waxaa ugu caansan xodxodosho,haasaawe,sheekaysi iyo erayo kale.
Af Soomaligu aad ayuu u badanyahay oo halkan kuma soo koobi karayno erayga SHUKAANSI:
Shukaansi macne ahaan waxay noqon kartaa qalqaalo iyo ku qancin in ruux ku dhiirado falida wax ruux kale uu dan bidayo, waxaadna maqashaa dhalinta oo marar badan leh odaygii aabe ahaa ayaan xoogaa lacag ah ka shukaansanayey isaga oo ula jeeda qalqaalo, hadaanse ka eegno dhinaca eraygu asal ahaan u taaganyahay waxaan oran karnaa waxaa eraygan la isticmaali karaa tusaale ahaan marka ruux ama gabar ama wiil uu arko ruux qanciyey isla markaana uu damco in uu soo xero galiyo soo jiidashada uu sameeyo ha ahaato ficil ama hadal waa shukaansi.
Shukaansi waxaa loo adeegsan karaa mid qoraal ah iyo mid fool ka fool ah sida adigoo gabadha ama wiilka toos ula hadasho ama adigoo qoraal ahaan u diro.
Shukaansi Qoraal ah: Waa kan marka aad gabadha ama wiilka aad ka xishooneyso ama aadan u u gudbin karin jaceylkaaga ama ay jirto daruufo kale oo aysan kuu sahli karin in aad toos ula hadasho qofka aad ka heshay.
Shukaansi fool ka fool ah: waa kan tooska ah oo aad wiilka ama gabadha aad ula hadasho kaas oo u baahan geesinimo iyo in aadan ka baqan dareenkaaaga.
XOD-XODASHO: waxay la macne tahay shukaanse laakiin waxa ay u qaas tahay raga waliba waxaan oran karnaa marka qof aad loogu qalqaaliyo guur ama gaabsi ayadoo qofka awood dheeraad ah la saarayo.
HAASAAWE: haasaawuhu waxa uu u badanyahay in aan ku tilmaamno sheeko caadi ah oo dhex marta labo ruux oo horay isu soo shukaansday.
XIRIIR: waa marxalada ugu danbaysa ee shukaansiga waxaana ku soo koobaynaa lafo gurka wixii labada ruux isku soo shukaansadeen guur iyo gaabsi.
Hadaba waxaa jiro habab fara badan oo shukaansi qoraal ah loo sameeyo sida in aad warqad fariin ah u qorto ama erayo gaagaaban oo loo adeegsado shukaansiga bilow ah.
Hadaba mowduuceena maanta waxa uu ku saabsan yahay shukaansi qoraal ah oo soo jiidasho leh kaasoo aad u qori karto qofka aad ka heshay ama aad jeceshahay, erayadaasi waxaa ka mid ah...
1.   Waan ku jecelahay, waan ku jeclaaday, waana ku jeclaan doonaa weligeey.
2. Waad ku mahadsan tahay inaad tahay xaaskeyga, waad ku mahadsan tahay inaad ii hibeysay noloshaada oo idil.. Waxaad tahay hormuudkii nolosheyda.
3.    Waxaa jiro labo xili oo keliya oo aan rabo in aan adiga kula joogo: Hada iyo weligeed.
4.    Ma jiro wax aan la barbar dhigi karo farxada aan dareemayo waqti xaadirkaan sababtoo ah waxaa tahay qeyb kamid ah nolosheyda. Waan ku jecelahay qaali.
5.    In aan adi ku jeclaado waa waxa kaliya ee nolosheyda farxadgelinayo.
6.    Waad ku mahadsan tahay in aad nolosheyda ku soo biirto. Waan ku jecelahay nolosheyda.
7.    Waxaa tahay nolosheyda, waxaa tahay qofka kaliya ee aan jecelahay, waxaad iga mudan tahay in aan ku ixtiraamo oo aan sharaftaada dhowro.
8.    Waxaan xisaabiyay inta jeer oo aan adiga kaa fikiro waxa ay ka badatay inta aan nafteyda ka fikiro, Waxaana ii soo baxday nafteydaba in aad adiga tahay.
9.    Markaan suuradaada qurxoon eego, qalbigeygu waxa uu dareemaa farxad.
10. Waxaa jiro dad ku maqli karaa adigoo ku hadlayaaa kumanaan eray hadana aanan ku fahmeyn. Waxaa jira dad ku fahmaya adigoo xittaa aan hale ray ku hadlin.
11. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa  sababta aan keli u ahay, ileyn adiga ayaa nolosheyda ka maqan.
12. Waxaan kuu ahaan doonaa ruux naftaada daacad u ah.
13. Dadku waxa ay dhahaan weey adag tahay in la helo ruux si dhab ah kuu jecel balse aniga adiga ayaan ku heystaaaa.
14. Jaceylku qiimaha uu leeyahy maanan aqoonin ilaa aan adiga kula kulmay.
15. Noloshu waa maalmo jaceylkuna waa halmar.